KarmaTube: Mampiroborobo Ny Fanovana Amin’ny Alalan’ny Fizarana Lahatsary/KarmaTube : Promouvoir le changement par le partage de vidéos · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2017 6:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, বাংলা, Português, English
KarmaTube dia sehatra fifampizaràna lahatsary antserasera mba handefasana lahatsary fohy sy ny antony [ araka ny nofaritan'izy ireo] ao amin'ny Habaka, miaraka amin'ny sosokevitra omen'ireo izay mijery izany mba hanohanana ny tranga aseho. Manolotra anareo ny Skateistan avy any Afghanistan izahay , ny Seeds of Light (Voan'ny Fahazavana) avy any Afrika Atsimo, ary Barrios de Paz (Faritry ny Fandriampahalemana) avy any Ekoadaoro amin'ny alàlan'ny KarmaTube.
Aostralianina telo no nanomboka ny Skateistan izay natao hampianarana ‘Skateboard’ ireo tanora any Afghanistan, ho karazana fialamboly hafa sy ho sehatra fifanakalozana kolontsaina. Naorina tao amin'ny dobo filomanosana tsy misy mampiasa intsony ao Kabul ny sekolin'ny skateboard Skateistan ary ao ireo ankizivavy sy ankizilahy no manao izany fanatanjahan-tena tsy ifaninanana izany. Toy izao no hitantsika ao amin'ny fanontaniana hita matetika ao amin'ny tranonkalany:.
Ankizivavy ny antsasaky ny mpianatra , izay nametraka an'i Afghanistan eo amin'ny laharana voalohany manerantany ho an'ny vehivavy milalao Skateboard.
Hita ao amin'ny fantsona YouTube Skateistan ihany koa ity lahatsary manaraka ity:
Fandaharan'asa natombok'i Leslie Temple-Thurston tany Afrika Atsimo ny Seeds of Light (Voan'ny Fahazavana) mba hanatsarana ny fiainan'ny mponina mahantra. Anisan'ireo tetikasa nampiroboroboan'ity vondrom-piarahamonina ity niaraka tamin'ny fanampian-Rtoa Temple-Thurston ny fangadiana fantsakana hanaovana [famatsiana] rano, ny fambolena legioma mba hanatsarana ny hery fiarovan'ny ankizy [amin'ny alàlan'ny sakafo voalanjalanja kokoa], ny fanombohana ny atrikasan'ny informatika sy ny fisorohana ny VIH sy ny SIDA .
Maneho ny asan-dRtoa Temple-Thurston sy ny vondrom-piarahamonina nandray soa avy amin'izany ity lahatsary manaraka ity :
Tetikasan'ny Ser Paz ny Barrios de Paz ary notarihin'i Nelsa Libertad Curbelo Cora, izay niara-niasa tamin'ny andian-jiolahy an-dalambe tany ambany tanàna any Guayaquil, Ekoadaoro, tamin'ny alàlan'ny fanangonana ireo mpikambana ao amin'ny andian-jiolahy isankarazany mba hifampiraharaha sy hiara-hiasa ho amin'ny fandriampahalemana. Nanampy ireo tanora andian-jiolahy an-dalambe ireo i Nelsa amin'ny fomba fijery hoe manao izany ireo tanora ireo rehefa te-hiditra ao anatin'ny fianakaviana iray, ho tohanana sy ho tarihan-dalana ireo ankizy manatevin-daharana azy ireo: manana ny hery sy vatsy hanatontosana ny asa am-pilaminana izy ireo miaraka amin'ny mpitantana manokana iray hafa, ary manana ny fahafahana mba hiova ho tsara kokoa izy ireo rehefa omena azy ireo ny fitiavana. Ao anatin'ity lahatsary ity izay nasiana dikantsoratra (amin'ny teny anglisy) 9 minitra dia manazava ny toe-javatra iainan'ny andian-jiolahy eny an-dalambe i Nelsa, sy ny psikolojian'ny mpikambana ao aminy ary ny hoe ahoana ny fomba nanampian'ny fandaharan'asa ireo zatovo tamin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny herisetra miverimberina. Mizara roa ny fanadihadiana manontolo izay azonao jerena ato sy ato.
Maro ireo tetikasa sy lahatsary manome aingam-panahy izay azo jerena ao amin'ny KarmaTube : fomba iray mandrisika ny hamantarana ireo olona tsara sitrapo izay manao asa soa ho an'ny hafa.